I-YouTube: Ungayihlinzeka Kanjani I-Ejensi Yakho noma Umthwebuli Wevidiyo Ukufinyelela Komsebenzisi Esiteshini Sakho | Martech Zone
Futhi, ngisebenza nebhizinisi elishiya i-ejensi futhi ngisebenza nami ukuze khulisa ubukhona babo be-YouTube… Futhi, futhi, i-ejensi ebebesebenzisana nayo inabanikazi bawo wonke ama-akhawunti abo. Bengilokhu ngikhala ngama-ejensi enza lokhu isikhathi esingaphezu kweminyaka eyishumi manje nokweluleka amabhizinisi ukuthi angalokothi akwenze lokhu. Futhi ibhizinisi akufanele linikeze ukungena ngemvume nephasiwedi ukuphatha noma iyiphi i-akhawunti.
Izindlela ezifanele zokwenza noma yimuphi umsebenzi we-ejensi ukusebenzisa izici zebhizinisi zawo wonke amapulatifomu amakhulu, kusuka kubabhalisi besizinda, abaphathi bewebhu, eziteshini zenhlalo ukuhlinzeka i-ejensi yakho ukufinyelela komphathi kepha ungalokothi ukhokhise nokufinyelela kobunikazi. Uma ungakwenzi, kuhlale kunethuba lokuthi i-ejensi nawe nixabane futhi kunzima ukubuyisa ubunikazi noma ukufinyelela i-ejensi yakho elandelayo. Noma okubi kakhulu, i-ejensi noma umxhumanisi osebenza naye angaphuma ebhizinisini noma angatholakali lapho uyidinga. Ungafaki ibhizinisi lakho engcupheni kanjena!
Namuhla, ngizokucacisela ukuthi ungakunikeza kanjani ukufinyelela kwi-ejensi yakho noma kumthwebuli wevidiyo kusiteshi sakho se-YouTube ngokubangeza njengomphathi womkhiqizo wakho ku-Google.
Ungangeza Kanjani Umphathi Ku-YouTube
I-Google ibilokhu ithuthukisa kancane okokuhlangana nezinketho kuzo zonke izinsizakalo zayo lapho ungaba ne-akhawunti yomkhiqizo bese ufaka abasebenzisi ngaphansi kwaleyo akhawunti ebanikeza ukufinyelela okulinganiselwe. Inzuzo yalokhu ilula:
Awuhlinzeki ukungena ngemvume okubalulekile namaphasiwedi nokuthembela kwi-ejensi yakho ukuze ibagcine bephephile.
Awukaze ukuhlinzeka ngobunikazi kwi-ejensi yakho, ngakho-ke ayikho inkinga uma unquma ukushiya. Umane ungene ngemvume futhi ususe ukufinyelela kwabo njengomphathi.
Umenzeli wakho une ukufinyelela okulinganiselwe kokuphatha i-akhawunti, ngaphandle kokufinyelela kuzici akufanele babe nokukhokha, ukuphathwa komsebenzisi, noma ubunikazi.
Izinyathelo Zokufaka I-ejensi noma Umthwebuli Wevidiyo Ukulawula Isiteshi Sakho se-YouTube
Vula I-YouTube Studio bese uchofoza izilungiselelo ezansi kwemenyu yangakwesokunxele.
Khetha izimvume kufayela lakho le- Amasethingi Imenyu bese uqhafaza Phatha izimvume. Ungahle udinge ukungena ngemvume ku-akhawunti yakho lapha ukuze i-Google iqinisekise ukuthi ungumnikazi.
Manje uku- imininingwane ye-akhawunti yomkhiqizo futhi ungakhetha phatha izimvume kubasebenzisi bakho.
Ngakwesokudla phezulu, chofoza isithonjana ukuze Mema Abasebenzisi Abasha.
Faka abasebenzisi abasha manje kuzokusiza ukwengeza ikheli le-imeyili kanye nendima yazo ye-akhawunti yakho. Isincomo sami se-ejensi noma umdwebi wevidiyo kungaba ukubangeza njenge- umphathi.
Yilokho nje… manje umsebenzisi wakho uzothola isaziso se-imeyili lapho bengamukela khona indima yabo futhi baqale ukuphatha Isiteshi sakho se-YouTube!
Tags: engeza umphathi ku-youtubei-akhawunti yomkhiqizoi-akhawunti yomkhiqizo we-googleindlelaphatha izimvume ku-youtubeyoutubeI-akhawunti yomkhiqizo we-YouTubeIsiteshi se-YouTubeUmphathi wesiteshi se-YouTubeukumaketha kwe-YouTubeIzimvume ze-YouTubeUmsebenzisi we-YouTubeIzimvume zomsebenzisi we-YouTube
Kuyini Ukuphathwa Kwamathegi Ebhizinisi? Kungani Kufanele Usebenzise Ukuphathwa Kwamathegi?
I-Camera IQ: Sebenzisa ukungathandwa kwabathelisi esikubona okungokoqobo (i-AR) Ukwakha ama-Try-On womkhiqizo obonakalayo